छाेरी जे गर्न पनि सक्छन् - Everest Dainik - News from Nepal
छाेरी जे गर्न पनि सक्छन्
याे पनि पढ्नुस स्थानीय तहको चुनावको नेतृत्वमा दलित महिलालार्इ पनि सहभागी गर्न माग
खासमा किन भइरहेका छन्, दिनहुँ यस्ता घटना ? निर्मला पन्तको हत्या भएको एक वर्ष बित्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन किन नसकेको ? यो ढिलासुस्ती कहिलेसम्म ? हाम्रो देशमा कानुन कार्यान्वयनको फितलो अवस्थाले यस्तो स्थिति आएको हो । यस्तै दण्डहीनताकै कारण कैयौं छोरीहरू घरबाट बाहिर निस्कँदा त्रासमा रहन बाध्य छन् । एउटी आमा विद्यालय गएकी छोरी घर फर्केर नआउन्जेल ढुक्क हुन सक्दिनन्, मनमा अनेकौं डर पालेर बस्न बाध्य हुन्छिन् ।
आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनेर समाजलाई देखाउन ‘छोरी सक्छिन्’ भन्न आमचेतना जरुरी छ । आफूलाई परेको हरेक चुनौती र समस्या समाधानका निम्ति उपयुक्त विकल्प खोज्न छोरीले सक्छिन् भन्ने आमअनुभूति हुन आवश्यक छ । सही रूपमा सबलीकरण भएमा वा गरिएमा आफ्नो धारणा/विचार पोख्न छोरी सक्छिन् । दुर्व्यहार र दुस्साहस विरुद्ध आवाज निकाल्न छोरी सक्छिन् । अन्याय र अत्याचार विरुद्ध वकालत गर्न छोरी सक्छिन् । आत्मविश्वास, आत्मक्षमता, आत्मबल र आत्मसम्मान वृद्धि गर्न छोरी सक्छिन् ।
ट्याग्स: women rights